शुक्रवार, माघ ७, २०७८ ०५:४६:२७ युनिकोड
अध्यक्ष माओ, चाउ एनलाई र चे ग्वेभाराबीचको कुराकानी
बुधवार, आश्विन २२, २०७६ यार्सान्यूज
मितिः नोभेम्बर १९, सन् १९६०
समयः साँझ ४ः२० देखि ६ः३० बजेसम्म
स्थानः झोङनानहाइको छिङचेन हल
सहभागीहरूः क्युवाली पक्षबाट–प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख तथा राष्ट्रिय विकास बैङ्कका प्रमुख अनेस्र्टाे चे ग्वेभारा र प्रतिनिधिमण्डलका अरु सबै सदस्यहरू
चिनियाँ पक्षबाट–चाओ एन लाई, लि सेनेन, गिएन पाओ, शेन चिआन, ली पिङ
भाषा अनुवादः काए तोङक्वा र ल्यु सिलियाङ
अध्यक्ष माओ त्से तुङः क्युवाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वागत छ ।
चे ग्वेभाराः अध्यक्ष माओसँग यसरी साक्षात्कार गर्ने अवसर पाउनु हाम्रो लागि ठूलो खुशीको विषय हो । हाम्रो सङ्घर्षका क्रममा हामीले सधैं अध्यक्ष माओप्रति गहिरो श्रद्धा व्यक्त गरेका छौं । हामी क्युवाको सरकारी प्रतिनिधिमण्डल हौं तर जन्मको आधारमा हामी चारवटा फरक–फरक राष्ट्रका छौं ।
अध्यक्षः तपाई अर्जेन्टिनाको हुनुहुन्छ ।
चेः जन्म अर्जेन्टिनामा ।
अध्यक्षः प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरू अरु कुन–कुन देशमा जन्मिनु भएको हो ?
चेः(रामिरो फर्नान्डो) माल्डोनोडा (इक्वेडरको क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टीका महासचिव) इक्वेडरियाली हुनुहुन्छ । (अर्थशास्त्री अल्बान) लातास्ते चिलीका हुनुहुन्छ । म अर्जेन्टिनाको हुँ । बाँकी अरु सबै क्युवाका हुनुहुन्छ । हामीमध्ये केही क्युवामा नजन्मेको भए तापनि हामी क्युवामा जन्मेको होइन भनेर क्युवाली जनताले हाम्रो चित्त दुखाउनु भएको छैन । वास्तवमा हामी क्युवाली क्रान्तिको रक्षा गर्छौं । फिडेल (क्यास्ट्रो) ले सबै ल्याटिन अमेरिकीहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ ।
अध्यक्षः तपाईहरू अन्तर्राष्ट्रिवादी हुनुहुन्छ ।
चेः ल्याटिन अमेरिकाका अन्तर्राष्ट्रिवादीहरू ।
अध्यक्षः एसियाली जनता, अफ्रिकी जनता र सम्पूर्ण समाजवादी मोर्चा तपाईहरूको समर्थनमा छन् । गएको वर्ष तपाईले केही एसियाली देशहरूको भ्रमण गर्नुभयो नि, (होइन र) ?
चेः केही देशहरू जस्तै भारत,सियाम(थाइल्याण्ड), इन्डोनेसिया, बर्मा, जापान र पाकिस्तान ।
अध्यक्षः चीनबाहेक एसियाका सबै प्रमुख देशहरूमा पुगिसक्नुभएको रहेछ तपाई ।
चेः त्यही भएर अहिले म यहाँ चीनमा छु ।
अध्यक्षः तपाईलाई स्वागत छ ।
चेः गएको साल म क्युवाबाट बाहिर निस्कँदा हाम्रो आन्तरिक परिस्थिति अझै स्थीर भइसकेको थिएन । त्यसकारण हामीले बाहिरी विश्वसँग व्यवहार गर्दा सजग हुनुपर्ने अवस्था थियो । तर आज परिस्थिति बद्लिएको छ । आज क्युवाको घरेलु अवस्थामा सुधार भएको छ र हामी दरिलो भएर उभिने भएका छौं ।
अध्यक्षः आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुध्रिएको छ ।
चेः सिङ्गो देश संगठित भएका छौं तर साम्राज्यवादीहरू हरेक दिन हाम्रो बीच विभाजनको कामना गरिरहेका छन् ।
अध्यक्षः किसान र मजदुर बाहेक तपाईहरू को सँग मिल्नुभएको छ ?
चेः हाम्रो सरकारले मजदुर–किसानहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ । हाम्रो देशमा अझै पनि मध्य पूँजीपति वर्ग छ । उनीहरू हामीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्छन् र सहकार्य गर्छन् ।
अध्यक्षःके त्यहाँ राष्ट्रिय पूँजीपति वर्ग छैन ?
चेःराष्ट्रिय पूँजीपतिहरू मुख्यतः आयातकर्ताहरू हुन् । उनीहरूका स्वार्थ साम्राज्यवादीहरूसँग गाँसिएको छ । त्यसकारण उनीहरू हाम्रो विरोधमा छन् । (त्यही भएर) उनीहरूलाई हामीले आर्थिक र राजनीतिक दुवै हिसाबमा सिध्याउने काम गर्यौं ।
अध्यक्षः उनीहरू त दलाल पूँजीपति वर्ग भए । (उनीहरूलाई) राष्ट्रिय पूँजीपति वर्ग मान्नुभएन ।
चेःकेही मानिसहरू पूर्ण रुपमा साम्राज्यवादमा निर्भर रहने गर्दछन् । साम्राज्यवादले उनीहरूलाई पूँजी, प्रविधि, प्याटेन्ट र बजार दिएको छ । उनीहरू बस्न त आफ्नै देशमा बस्छन् तर उनीहरूको स्वार्थ साम्राज्यवादसँग जोडिएको हुन्छ । उदाहरणको लागि चिनी व्यापारीहरू ।
अध्यक्षः चिनी व्यापारीहरू ।
चेः उनीहरू थिए । तर अहिले त सबै चिनीको व्यापारी राष्ट्रकरण भइसकेको छ ।
अध्यक्षः तपाईहरूले मुलतः सबै संरा अमेरिकी पूँजीलाई अधिग्रहण गर्नुभयो ।
चेः मुलतः होइन, सबै नै । पक्कै पनि केही पूँजी अधिग्रहणबाट उम्के । तर त्यसको अर्थ हामीले त्यो पूँजी पनि अधिग्रहण गर्न नचाहेको भने होइन ।
अध्यक्षः तपाईहरूले अधिग्रहणको क्षतिपूर्ति पनि दिनुभयो कि?
चेः यदि कुनै चिनी कारखानाले अधिग्रहणअघि हामीसँगबाट ३० लाखभन्दा बढी टन चिनी किनेको खण्डमा हामीले किनेको चिनीको मूल्यको ५ देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिएका छौं । क्युवाको अवस्था थाहा नभएको मानिसहरूलाई यो नीतिभित्र निहीत विरोधाभास बुझ्न गाह«ो महसुस गर्नेछन् ।
अध्यक्षः तपाईहरूले प्रतिवर्ष ४७ काबालैरिया (क्युवाको हकमा ३३ एकड भूमि) दरले एक प्रतिशत व्याजदरमा पूँजी र नाफा फिर्ता गर्नुभएको भनी पत्रिकामा लेखेको थियो नि ।
चेः हामीसँग ३० लाखभन्दा बढी टन चिनी किन्ने कम्पनीले मात्र क्षतिपूर्ति पाउँछन् । अरु कुनै सुविधा वा क्षतिपूर्ति छैन । तुलनात्मक रुपमा अलि ठूला दुई वटा बैङ्कहरू छन् । हामीले तिनलाई राष्ट्रकरण गरेनौं किनभने उनीहरूले हाम्रा घरेलु र वैदेशिक नीतिहरू मान्न तयार भए ।
अध्यक्षः केही समयको लागि कार्यनीतिक रुपमा केही साम्राज्यवादी कम्पनीहरूको उपस्थितिलाई सहन गर्न सकिन्छ । हामी कहाँ पनि केही साम्राज्यवादी कम्पनीहरू छन् यहाँ ।
प्रधानमन्त्री चाओ एन लाईःजस्तै एचएसबीसी(हङकङ एण्ड साङ्घाई बैङ्किङ कर्पोरेशन) । त्यसको उपस्थिति प्रतीकात्मक मात्र थियो ।
चेः क्युवामा क्यानाडेली बैङ्कहरू यहाँको एचएसबीसी जस्तै हुन् ।
अध्यक्षः तपाईहरूले बहुमत मजदुर किसानहरूलाई संगठित गर्नुपर्दछ ।
चेः पूँजीपतिहरूमध्येबाट केही मानिसहरू हाम्रो विरुद्ध गए र शत्रुको मोर्चामा सामेल भए ।
अध्यक्षः तपाईहरूको विरोधमा जानेहरू तपाईका शत्रु हुन् । प्रतिक्रान्तिकारीहरूलाई दबाएर तपाईहरूले महान काम गर्नुभएको छ ।
चेः प्रतिक्रान्तिकारीहरू आक्रामक गतिविधि गर्ने गरेका छन् । (उदाहरणको लागि)कहिले काहींहरू उनीहरूले केही टापुहरूमाथि कब्जा जमाउने गर्दछन् । तर चाँडै उनीहरूलाई त्यहाँबाट धपाइनेछ । चिन्ता मान्नु पर्ने कुरा केही छैन । हामीले तिनीहरूका नेताहरूलाई पक्राउ गरेलगत्तै गोली हानेर सिध्याउने गरेका छौं । उनीहरूलाई पारास्युटबाट हातहतियार उपलब्ध गराइने गरेको छ । सबै संरा अमेरिकाबाट ।
अध्यक्ष ः तपाईहरूले केही अमेरिकीहरूलाई पनि पक्राउ गर्नुभयो नि होइन ?
चेः उनीहरू चाँडै थाके र उनीहरूलाई गोली हानी हत्या गरियो ।
चाओ एन लाई ः अमेरिकी सरकारले त्यसको विरोध ग¥यो र तपाईहरूले त्यसको प्रतिकार गर्नुभयो ।
अध्यक्षः तपाईहरू दृढनिश्चयी हुनुहुन्छ । अन्तिम समयसम्म दृढ रहनुहोला । यो क्रान्तिप्रतिको आशा हो र साम्राज्यवादीहरू आफै ठूलो सङ्कटमा फस्नेछन् । तर आफ्नो अडानमा टिक्न नसके र सम्झौता गरे साम्राज्यवादीहरूले तपाईसँग व्यवहार गर्न सजिलो मान्नेछन् ।
चेः हाम्रो क्रान्तिको पहिलो चरणमा फिडेलले सार्वजनिक आवासका समस्याहरू समाधान गर्ने तरिका प्रस्ताव गर्नुभयो । सरकारले सबै जनताको लागि घर बनाइदिने जिम्मा लियो । हामीले ठूला घरका मालिकहरूका सम्पत्ति कब्जामा लियौं र जनतालाई बाँडिदियौं । साना घरका मालिकहरूले आफ्नो सम्पत्ति आफैसँग राखे ।
अध्यक्ष ः अनि ?
चेः अहिले हामी क्रान्तिको दोस्रो चरणमा पुगेका छौं । अर्थात् हामी मानिसले मानिसमाथि गर्ने शोषण अन्त्य गर्ने चरणमा पुगेका छौं । घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सापेक्षमा हामी हाम्रो शासन बलियो बनाउनेतिर लागेका छौं । आज निकै जर्जर अवस्थामा रहेको अशिक्षा र बेरोजगारीलाई निर्मुलन गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र भूमिसुधारका थप कार्यक्रम लागु गर्नेतिर हामी अघि बढेका छौं ।
अध्यक्षः निकै राम्रो । तपाईहरूले ल्याटिन अमेरिकामा प्रभाव पार्नुभएको छ र त्यसको प्रताप एसिया र अफ्रिकासम्म फैलिएको छ । तपाईहरूले राम्रो काम गरेसम्म उनीहरू तपाईहरूबाट प्रभावित रहनेछन् ।
चेः विशेषतः ल्याटिन अमेरिका ।
अध्यक्षः ल्याटिन अमेरिकाका मध्यम पूँजीपति र राष्ट्रिय पूँजीपतिहरू समाजवाददेखि डराएका छन् । निश्चित समयावधिसम्म हामी सामाजिक सुधारमा दौडिहाल्नु हुन्न । यसो गर्दा ल्याटिन अमेरिकाका साना पूँजीपति र राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गको मन जित्नको लागि राम्रो हुनेछ । चीनमा विजयपश्चात च्याङ काई सेकका व्यापार र पहिले जर्मनी, इटाली र जापानको स्वामित्वमा रहेका, पछि च्याङको स्वामित्वमा ल्याइएका सम्पत्ति राष्ट्रकरण गरियो । जसले कुल औद्योगिक पूँजीमध्ये राज्यको पूँजी ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सफल भयो । राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गको हातमा कुल औद्योगिक पूँजीको २० प्रतिशत मात्र भए पनि उनीहरूले १० लाखभन्दा बढी मजदुरहरूलाई रोजगार दिए र समग्र व्यापारिक सञ्जाल उनीहरूको नियन्त्रणमा थियो । यो समस्या समाधान गर्न हामीलाई सात वर्ष लाग्यो । हामीले यो समस्या समाधान हुने आशामा उनीहरूलाई रोजगार, मताधिकार, निजी–सार्वजनिक व्यवस्थापन र शेयर बिक्री बन्दोबस्त गर्यौं । यो एकाकार गरिएको समाधानले उनीहरूलाई सन्तुष्ट बनायो र विदेशमा तुलनात्मक रुपमा राम्रो प्रभाव पार्यो । यो समाधानबाट एसियाली पूँजीपतिहरू पूर्णतः खुशी त भएनन् तर उनीहरूलाई एकताबद्ध बनाउन यो स्वीकार्य उपाय भएको र शेयर बिक्रीको नीतिको प्रयोग सकारात्मक रुपमा लिए । शहरी घरेलु क्षेत्र र मध्यम पूँजीपतिहरूको समस्या सामना गरियो । यसको निम्ति सहकारीको माध्यमलाई पनि प्रयोग गरियो ।
चेः हामीले चीनलगायत अरु समाजवादी देशहरूका अनुभवबाट सिक्न जरुरी छ । पूँजीपति वर्ग विदेशमा नजाउन् भनी हामीले उनीहरूलाई सम्मान, रोजगार र पैसा दियौं । हामीले प्राविधिकहरूलाई ज्याला दियौं । ऐतिहासिक रुपमा हामी कहाँ घरेलु उद्योग थिएन । त्यसकारण हामीले त्यो समस्या समाधान गर्नुपरेन । हामीले काम नपाएका सहकारीहरूलाई संगठित बनायौं र त्यसवापत हामीले उनीहरूलाई काम दियौं ।
अध्यक्ष ः संरा अमेरिका क्युवामा राष्ट्रिय पूँजीपति विकास भएको चाहँदैन । जापान, कोरिया र चीनकै उत्तरपूर्व(मञ्चुरिया), फ्रान्स र भियतनामको सन्दर्भमा पनि त्यही हो । उनीहरूले स्थानीय मानिसहरूलाई ठूला उद्योगहरू चलाउन नै दिंदैनन् ।
चेः यो प्रक्रियाले ल्याटिन अमेरिकामा भएको घटनाको झझल्को दिएको छ । सामन्तवादी शक्तिलाई ध्वस्त बनाउन साम्राज्यवादले राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गलाई विकास हुन दिने गर्दछ । राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गले निकै धेरै आयात करको माग पनि गर्न सक्छन् । तर उनीहरू राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिने गर्दैनन् । वास्तवमा उनीहरूको स्वार्थ साम्राज्यवादसँग मिलेको हुन्छ ।
अध्यक्ष माओः मेरो एउटा प्रश्न छ । पूँजीगत हिसाबबाट के ब्राजिलको स्पात कारखाना संरा अमेरिकासँग जोडिएको छ ?
चेः ब्राजिलका प्रमुख धातु कारखानाहरू अमेरिकी पूँजीले स्थापना गरेका हुन् ।
चाओ एन लाइः अमेरिकी पूँजी कति प्रतिशत छ ? ब्राजिलले वार्षिक रुपमा १६ लाख स्पात उत्पादन गर्ने गरेको छ ।
चेः ब्राजिलका कारखानाहरूमा समग्रमा अमेरिकी पूँजी कति छ, त्यो त त्यत्ति स्पष्ट छैन । तर प्राविधिक रुपमा त्यो पूर्णरुपमा अमेरिकामा निर्भर छ । ब्राजिल धेरै ठूलो देश हो तर ल्याटिन अमेरिकाका अरु देशहरू र ब्राजिलबीच तात्वि रुपमा कुनै अन्तर छैन ।
अध्यक्षः मेरो अर्को पनि प्रश्न छ । शुरुमा क्युवाली भूमिा टेकेदेखि विजय हासिल गर्दासम्म तपाईंहरूलाई दुई वर्षको समयावधि लाग्यो । तपाईहरूले किसानहरूलाई संगठित गर्नुभयो र विजय हासिल गर्नुभयो । के ल्याटिन अमेरिकाका अरु देशहरूमा त्यही तरिकाबाट काम गर्न सम्भव छ ?
चेः यो प्रश्नको जवाफ एकै किसिमबाट दिन सकिंदैन । वास्तवमा तपाईसँग हाम्रो तुलनामा धेरै अनुभव र गहिरो विवेक छ । अरु ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको तुलनामा क्युवामा क्रान्ति गर्न निकै कठिनाई सामना गर्नुपर्यो । तर त्यहाँ एउटा अनुकूलको वातावरण भने थियो । साम्राज्यवादीहरूको उपेक्षाको फाइदा उठाएर हामीले विजय हासिल गरेका थियौं । साम्राज्यवादीहरूले हामीमाथि दमन गर्न कुनै शक्ति केन्द्रित गरेको थिएन । उनीहरू विजय हासिल गरेपश्चात फिडेलले आखिरमा उनीहरूसँगै ऋण लिन हात फैलाउने सोचेका थिए । आफूसँग सहकार्य गर्ने उनीहरूको अपेक्षा थियो । तर अरु ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा क्रान्तिको शुरुवात गर्दा त्यस्ता खतराको सामनता गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । जस्तै उदाहरणको लागि ग्वाटेमाला । आफ्ना जलसेना प्रयोग गरेर संरा अमेरिकाले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्यो ।
अध्यक्षः ती ल्याटिन अमेरिकी देशहरूका आन्तरिक परिस्थितिको सन्दर्भमा कुनै भिन्नता छन् त ?
चेः राजनीति भिन्नताहरू छन् । तर सामाजिक रुपमा भन्नुपर्दा यी सबै देशहरूलाई मात्र दुई वा तीन ठूला प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ । तीन वटा देशहरूमा सैनिक सङ्घर्ष चालू छ–पाराग्वे, निकारागुआ र ग्वाटेमाला ।
अध्यक्षः संरा अमेरिकाले अब आफ्नो संगीनको तीर ग्वाटेमाला र निकारागुआतिर सोझ्याएको छ ।
चेः कोलोम्बिया र पेरुमा जनताको महान् क्रान्तिको उदय हुने सम्भावना छ ।
अध्यक्षः मैले भनेजस्तै पेरुमा बहुमत मानिसलाई जमिनको आवश्यकता छ । कोलोम्बियामा पनि त्यही हो ।
चेः पेरुको सन्दर्भ रोचक छ । त्यहाँ जहिल्यै पनि आदिम साम्यवादको परम्परा छ । स्पेनियालीहरूले आफ्नो शासनको क्रममा सामन्तवाद र दास व्यवस्था ल्याएका हुन् । तर त्यहाँ त्यसबीच पनि आदिम साम्यवादको अवसान भएन । बरु त्यो व्यवस्था अझै पनि कायम छ । कुज्कोमा कम्युनिष्ट पार्टीले चुनाव जित्यो । चुनावमा कम्युनिष्ट विजयको लागि यो सङ्घर्ष जातीय सङ्घर्षसँग जोडिएको छ । पेरुमा धेरै आदिवासी जनता बस्छन् तर गोरा, मेत्सिजोस आदिवासीहरूले मात्र जमिनमाथि हक पाएका छन् र जमिन्दार बनेका छन् ।
अध्यक्षः स्थानीय जनताको जनसङ्ख्या ९० लाखदेखि एक करोड छ । जबकि स्पेनियालीहरूको जनसङ्ख्या दश हजारमात्र छ ।
चेः यो तथ्याङ्क अतिरञ्जनापूर्ण हुन सक्छ । पेरुमा १ करोड २० लाख जनसङ्ख्या छ । तीमध्ये १ करोड आदिवासीहरू छन् भने २० लाख जनता गोरा छन् ।
अध्यक्षः पेरुको अवस्था र दक्षिण अफ्रिकाको अवस्था उस्तै रहेछ । दक्षिण अफ्रिकामा ३० लाखमात्र बेलायतीहरू रहेछन् ।
चाओ एन लाईः ३० लाख बेलायती, १० लाख डच, १० लाख मिसिएका, ८० लाख काला र ५ लाख आदिबासीहरू छन् । काला र आदिबासीहरूको अवस्था सबभन्दा गएगुज्रेको अवस्था छ । गोराहरूलाई मात्र मताधिकारको बन्दोबस्त छ ।
चेः पेरुमा अझै पनि दास प्रथा छ । सामान्यरुपमै भूमिवापत मानिसको किनबेच हुने गरेको छ ।
चाओ एन लाईः विगतमा तिब्बतमा जस्तै ।
चेः ती पिछडिएका ठाउँहरूमा रैथानेहरूसँग पैसा छैन । जब केही कुरा बेच्नु पर्दा बिक्रेताले तराजुको एउटा पलामा बेच्न राखेको सामान र अर्को पलामा तामाका सिक्का राखेर तौलिने गर्दछन् । कागजको मुद्रा प्रयोग गर्दैनन् उनीहरू ।
अध्यक्षः कोलोम्बियाको अवस्था केही फरक छ नि होइन र ?
चे ः कोलोम्बियामा सामन्तवाद कमजोर छ । तर त्यहाँ क्याथलिकहरूको बलियो उपस्थिति छ । त्यहाँका सामन्त र क्याथलिक चर्चहरू संरा अमेरिकासँग मिलेका छन् । त्यहाँका आदिवासीहरू गरीब छन् तर उनीहरू दास भने होइनन् । कोलोम्बियामा गुरिल्ला शक्तिहरू थिए तर आजभोलि उनीहरू लड्न छोडिसके ।
अध्यक्षः के क्युवाको अरु ल्याटिन अमेरिकी देशहरूसँग कुटनीतिक सम्बन्ध छ ?
चेः धेरै देशहरू एक अर्कासँग जुधेका छन् र क्युवासँग सम्बन्ध तोडेका छन् । हाइटी, दोमिनिकन गणराज्य र ग्वाटेमाला यस्ता देशका उदाहरण हुन् । कोलोम्बिया, एल साल्भाडोर र होन्डुरसले क्युवाली राजदुतलाई अयोग्य घोषणा गरे । ब्राजिलले पनि बिना कारण क्युवाली राजदुतलाई निकाला ग¥यो ।
चाओ एन लाईः जम्माजम्मी सात वटा देशहरू भए ।
अध्यक्षः त्यसो भए क्युवाको ल्याटिन अमेरिकाका अधिकांश देशहरूसँग कुटनीतिक सम्बन्ध छ । ल्याटिन अमेरिकाका १९ वटा देशहरूमध्ये ७ वटाले रहेनन् । बाँकी रहे १२ वटा ।
चेः शुरुका तीन वटा–हाइटी, दोमिनिकन गणराज्य र ग्वाटेमालाको क्युवासँग सम्बन्ध थिएन । कोलोम्बिया, एल साल्भाडोर, होन्डुरस र ब्राजिलमा क्युवाका कुटनीतिक प्रतिनिधि छन् । तर क्युवाली राजदुत नै छैन । क्युवालीहरू ब्राजिलमा जानु भनेको तथाकथित फलामे पर्दाको अर्को तिर जानु जस्तै हो ।
अध्यक्षः ग्वाटेमाला र निकारागुआका युद्धको प्रकृति कस्तो हो ? के तिनीहरू जनताका युद्धहरू हुन् ?
चेः यसको म यही हो भन्ने जवाफ दिन सक्तिन । मलाई पारेको प्रभावका आधारमा ग्वाटेमालाको लडाई जनताको युद्ध हो भने निकारागुआको लडाई सामान्य प्रकारको हो । ती देशहरू क्युवाबाट टाढा छन् । त्यसकारण त्यहाँका लडाईहरूको प्रकारबारे कुनै धारणा छैन । मैले भर्खर भनेको जवाफ मात्र आत्मगत जवाफ हो ।
अध्यक्षः ग्वाटेमालामा जे भइरहेको छ, के त्यो ज्याकोभ अर्वेन्ज गुज्मानसँग जोडिएको छ ?
चेः म चीनको लागि निस्कने बखतमा मैले यो सन्दर्भमा अर्वेन्जको घोषणा हेर्ने मौका पाएँ । त्यहाँका क्रान्ति लोकप्रिय प्रकारको हुनसक्छ ।
अध्यक्षः अहिले अर्वेन्ज क्युवामा छन् ?
चेः हो, उनी क्युवामा छन् ।
अध्यक्षः उनी चीन र सोभियत सङ्घ पनि आएका छन् । राम्रो मान्छे हुन् उनी ।
चेः म उनलाई विश्वास गर्छु । विगतमा उनले गल्तीहरू गरे । तर उनी अडिग, अघि बढ्ने खालका र विश्वासयोग्य छन् ।
(अध्यक्ष माओले प्रतिनिधिमण्डलका सबै सदस्यहरूलाई रात्रीभोजमा आमन्त्रण गरे । त्यहाँ पनि कुराकानी भने चालु रह्यो ।)
चेः चीन र क्युवाबीच दुई वटा कुराहरू झण्डै झण्डै उस्तै छन् । यो कुराले मलाई निकै प्रभावित बनाएको छ । तपार्इंहरू जब क्रान्ति गर्दै हुनुहुन्थ्यो, च्याङ काई सेकले तपाईंहरूमाथि गरेको हमलालाई ‘घेरामा पार र दबाऊ’ भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ । यी दुवै शब्दहरू प्रतिक्रियावादीहरूले हाम्रोतिर पनि प्रयोग गरे । उनीहरूले प्रयोग गरेको रणनीति उही रहेछ ।
अध्यक्ष माओः हाम्रो शरीरमा जब कुनै बहिरिया तत्व प्रवेश गर्छ, सेतो रक्तकोषले त्यसलाई घेर्ने गर्छ र दबाउने गर्दछ । च्याङ काई शेकले हामीलाई व्याक्टेरियालाई जस्तै व्यवहार गर्यो र खत्तम गर्न खोज्यो । हामीले २२ वर्षसम्म उनीविरुद्ध विभिन्न किसिमबाट लड्यौं । दुई पटक हाम्रो सहकार्य भयो र दुई पटक हाम्रो विग्रह भयो । स्वभाविक रुपमा त्यसले धेरै लामो समय लियो । पहिलो पटकको सहकार्यमा दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरूका पछि लागेर गल्ती गर्यौं । पार्टीभित्र दक्षिणपन्थी समूहको उदय भयो । परिणामतः च्याङ काई शेकले पार्टीभित्र खेल्ने मौका पायो, साम्यवादको विरोध भयो र युद्धमार्फत दबाउने काम भयो । उत्तरी अभियानको क्रममा त्यसो भएको थियो । सन् १९२४ देखि १९२७ सम्मको दोस्रो चरणमा युद्धसिवाय केही भएन । हामीलाई जान कुनै पनि बाटो राखिएन । तपाईहरूलाई जसरी बाटिस्टाले कुनै पनि ठाउँ छोडेका थिएनन्, बरु जनता मार्ने काममात्र गरिरह्यो । बन्दुक बोकेर लड्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन भन्ने कुरा च्याङ काई शेकले हामीलाई सिकाए । जसरी क्युवाली जनतालाई बाटिस्टालाई त्यो कुरा सिकाएका थिए, चिनियाँ जनतालाई पनि च्याङ काई शेकले सिकाए । हामीलाई कसरी लड्ने भन्ने कुरा थाहा थिएन न त हामी लड्ने तयारीमै थियौं । प्रधानमन्त्री र म त बुद्धिजीवी थियौं । उहाँ (अध्यक्ष माओ उपप्रधानमन्त्री ली सेनेनलाई सङ्केत गर्दै हुनुहुन्थ्यो) त मजदुर हुनुहुन्थ्यो । तर हामीसँग बाँकी अर्को विकल्प नै के थियो र ? च्याङ काई शेक हामीलाई मार्न चाहन्थे ।
(अध्यक्ष माओले क्युवाली जनताको क्रान्तिको सफलताको लागि र प्रतिनिधिमण्डलका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै गिलास उठाएर टोस्ट प्रस्ताव गर्नुहुन्छ ।)
अध्यक्ष माओः एकचोटी युद्धको सुरुवात भएपश्चात् त्यो कम्तीमा दश वर्ष चल्ने गर्दछ । हामीले आधार क्षेत्र त बनायौं तर हामीबाट दक्षिणपन्थी अवसरवादी गल्तीहरू भए । जब हामी अतिवामपन्थी नीतिमा झुकाव राख्न थाल्यौं, परिणामतः हामीले आधार क्षेत्रहरू गुमाउँदै गयौं । अनि हामी अन्यत्र जान बाध्य भयौं । लामो अभियान त्यसैको परिणाम थियो । ती गल्तीहरूले हामीलाई सिकायो । मूलतः हामीले दुई वटा गल्ती गर्यौं–एउटा वामपन्थी र अर्को दक्षिपन्थी गल्ती । तिनै गल्तीबाट हामीले पाठ सिक्यौं । जब जापानले चीनविरुद्ध हमला सुरु गर्यौँ, हामीले च्याङ काई शेकसँग मोर्चा गर्यौं । त्यस्तो कालखण्ड तपाईहरू इतिहाससँग मिल्दैन ।
चेः धन्य हाम्रो इतिहासमा त्यो घटना छैन ।
अध्यक्ष माओः बाटिस्टासँग मोर्चाबन्दी गर्ने तपाईहरूको सन्दर्भमा सम्भावना नै थिएन नि ।
चेः बाटिस्टाको अमेरिकीहरूसँग कुनै द्वन्द्व थिएन ।
अध्यक्ष माओः च्याङ काइ शेक बेलायत र संरा अमेरिकाको कुकुर नै थिए । जापानले जब चीनमाथि कब्जा जमायो, च्याङ काई शेकलाई मान्य भएन । आठ वर्ष लामो तेस्रो चरण (१९३७–४५)मा हामीले जापानविरुद्ध लड्न च्याङ काई शेकसँग सहकार्य गर्यौँ । त्यो सहकार्य राम्रो खालको थिएन किनभने च्याङ काई शेकले दलाल पूँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । उनी बेलायत र संरा अमेरिकाको दलाल बनेका थिए ।
चौथो चरणमा जापान भागिसकेपश्चात च्याङ काई शेकले हामीमाथि हमला गर्यो । एक वर्ष त हामीले उसको प्रतिरोधमा बिताउनुपर्यो । त्यसपछि हामी आक्रामक बन्यौं र साढे तीन वर्षसम्म उसलाई पराजीत गर्न लाग्यो । सन् १९४९ मा हामीले समग्र विजय हासिल गर्यौं । च्याङ काई शेक ताइवान भाग्यो । हाम्रो हातबाट ताइवान टापु रहेन ।
प्रधानमन्त्री चाओ एनलाईः तपार्इंहरूको पनि व्युनो टापु (द आइल्स अफ पाइन) छ नि । बाटिस्टा यो टापु छोडेर पनि नभाग्दा सम्म त उनीहरूले त्यसमाथि कब्जा जमाएका थिए ।
अध्यक्ष माओः त्यसमाथि कब्जा जमाउनु निकै राम्रो हो ।
चेः तर फेरि पनि अमेरिकाले हमला गर्ने खतरा भने रहिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री चाओ एन लाईः अमेरिकीहरूले द आइल्स अफ पाइन्समा हमला गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
अध्यक्ष माओः त्यसको अर्थ अमेरिकी साम्राज्यवाद हाम्रो साझा दुश्मन हो । साथै संसारका जनताको साझा दुश्मन भए । तपाईं त निकै युवा देखिनुहुन्छ ।
चेः तपाईले क्रान्ति सुरु गर्दा मेजर सुनोलबाहेक हामी अरु त कोही पनि जन्मेका पनि थिएनौं । मेजर सुनोल अहिले ३५ वर्षको हुनुहुन्छ । उहाँ हामीमध्ये सबभन्दा पाको हुनुहुन्छ ।
अध्यक्ष माओः विगतमा हामीले युद्धको मैदानमा सङ्घर्ष ग¥यौं । आजभोलि हामी निर्माणमा सङ्घर्ष गरिरहेका छौं ।
कमाण्डर इड्डी सुनोलः क्रान्तिको रक्षा गरिरहनुभएको छ ।
चेः क्युवा र चीनबीच अर्को एउटा कुरा पनि मिलेको छ । सन् १९४५ मा भएको क्युवाली कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनमा प्रस्तुत समसामयिक प्रतिवेदनमा भनिएको छः केही शहरिया मानिसहरू गाउँ भनेपछि नाक खुम्च्याउँछन् । हाम्रो सङ्घर्ष दुई भागमा विभाजित छ । पहिलो पहाडी क्षेत्रमा छापामार युद्ध चलाउनुपर्दछ र अर्कोतिर शहरमा हड्तालहरू गर्नुपर्दछ । शहरमा हड्तालहरू गरिरहेका शक्तिहरूले पहाडी क्षेत्रमा छापामार युद्ध गरिरहेकाहरूलाई उपेक्षा गर्ने काम भइरह्यो । तर अन्तमा शहरी विद्रोहका पक्षधरहरू असफल भए ।
प्रधानमन्त्री चाओ एन लाईः धेरै मिल्दोजुल्दो ।
अध्यक्ष माओः बेकामका शक्तिहरूबाट फाइदा लिन खोज्नु दुस्साहसवाद हो । जब उनीहरूले गाउँहरूमा ध्यान दिन असफल हुन्छन्, शहरका जनतालाई किसानहरूसँग एकताबद्ध हुन त्यत्ति सजिलो हुने गर्दैन ।
प्रधानमन्त्री चाओ एन लाईः अक्टोबर ५ को तपाईंको लेख पढिसकेपश्चात मात्र मेरो दिमागमा यो कुरा खुल्यो । (अक्टोबर ५ को लेख चे ग्वेभाराले क्युवाली विचारधाराको अध्ययन गरी लेख्नुभएको लेख हो र भेर्दा ओलिभियो नामको पत्रिकामा यो लेख प्रकाशित भएको थियो ।) मैले त्यो लेखका उद्धरणहरू पढेको छु र त्यसमा उठाइएका विषयहरू अध्ययन गरेको छु । तपाईंलाई त बुद्धिजीवी मान्नुपर्दछ ।
चेः म बुद्धिजीवी भन्न सकिने तहमा पुगिसकेको छैन ।
अध्यक्ष माओः तपार्इं त लेखक हुनुहुन्छ । मैले पनि त्यो लेखका अंशहरू पढेको छु र म तपाईंका विचारहरूसँग धेरै धेरै सहमत छु । त्यो लेखले समग्र ल्याटिन अमेरिकालाई प्रभावित बनाउन सक्दछ ।
प्रधानमन्त्री चाओ एन लाईः तपाईंले त्यो लेखको पूरा प्रति ल्याउनुभएको छ ?
चेः म तपाईलाई त्यसको प्रति उपलब्ध गराउने प्रयास गर्नेछु ।
अध्यक्ष माओः त्यो लेखमा तपाईंले मूलतः तीनवटा सिद्धान्त अघि सार्नुभएको छ । जनताले प्रतिक्रियावादीहरूलाई पराजीत गर्न सक्छन् । त्यसको लागि क्रान्तिको सबै परिस्थिति परिपक्व बनाउन जनताले उपयुक्त समय कुर्न जरुरी छैन । तेस्रो सिद्धान्त के हो रे ?
चेः तेस्रो सिद्धान्त ल्याटिन अमेरिकाको सन्दर्भमा प्रमुख कार्यभार ग्रामीण भेगमा आधारित रहनेछ ।
प्रधानमन्त्री चाओ एन लाईः क्रान्तिलाई ग्रामीण भूभागसँग जोड्न निकै महत्वपूर्ण छ ।
चेः हामी पनि यो बुँदामा निकै अडिग रह्यौं ।
प्रधानमन्त्री चाओ एन लाईः केही ल्याटिन अमेरिकी साथीहरू किसानहरूको भूमिका त्यत्ति महत्वपूर्ण मान्दैनन् । तपाईंहरूले यो बुँदामा तपाईंहरू स्पष्ट हुनुभयो र सफल हुनुभयो । चिनियाँ क्रान्तिको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै भयो । धेरै मानिसहरूले किसानहरूको योगदानको उपेक्षा गरे तर अध्यक्ष माओले त्यही बुँदामा जोड दिनुभयो ।
अध्यक्ष माओः हामीलाई शहरमा पस्न नदिएर शत्रुले नै हामीलाई यो रणनीति सिकाएका हुन् । च्याङ काई शेक जनता मार्न चाहन्थ्यो । त्यसअवस्थामा तपाईले के नै पो गर्न सक्नुहुन्थ्यो र ?
चेः माओका रचनाहरूमा लेखिएका विचार फिडेल क्यास्ट्रोले निकै महत्वपूर्ण भएको पाउनुभयो । सुरुमा बरु मैले त्यो महत्वलाई पहिल्याउन सकेको थिइनँ । युद्धबन्दीहरूलाई आत्मिक व्यवहार गर्ने, उनीहरूका घाउ, चोटपटक उपचार गर्ने र फिर्ता पठाउने विचार । हामीले यो विचार हाम्रो सङ्घर्षको क्रममा व्यवहारमा ल्यायौं र साँच्चै निकै महत्वपूर्ण भएको अनुभव गर्यौं ।
अध्यक्ष माओः शत्रु सेनालाई विभाजित गर्ने यो उपाय हो ।
चेः यो व्यवहारलाई हामीले पछि मात्र व्यवहारमा ल्यायौं । त्यसअघि त युद्धबन्दीहरूको हामी जुत्ता र लुगा फुकाल्न लगाउँथ्यौं किनभने हाम्रा लडाकुहरूसँग जुत्ता र लुगाको अभाव थियो । तर पछि फिडेलले हामीलाई त्यसो नगर्न निर्देशन दिनुभयो ।
अध्यक्ष माओले आफ्नो गिलास उठाउनुभयो र फिडेलको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै टोस्ट प्रस्ताव राख्नुभयो ।
चेः छापामार युद्धको समयमा मानिसहरू राम्रोसँग खान समेत सक्दैनथे । हामीलाई बौद्धिक खानाको पनि अभाव थियो । हामीले केही पढ्न पनि सक्दैनथ्यौं ।
प्रधानमन्त्री चाओ एनलाईः जब अध्यक्ष माओ छापामार युद्ध लड्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पत्रपत्रिका ल्याउन प्रायशः मान्छे पठाउनुहुन्थ्यो ।
अध्यक्ष माओः पत्रपत्रिकालाई सूचनाको रुपमा लिनुपर्दछ । शत्रुका अखबारहरूले प्रायशः शत्रुका कामबारे सूचना चुहाउने गर्दछ । ती आफैमा एउटा स्रोत हुन् । हामीले केही हजार मानिसहरूको साथ लिएर क्रान्तिको थालनी गर्यौं । त्यसपछि हाम्रो फौजको आकार दश हजारको भयो । पछि त तीन लाखको फौज बन्यो । त्यही बिन्दूमा हामीले केही वामपन्थी गल्तीहरू गर्यौं ।लामो हिंडाईपछि तीन लाखको फौज पच्चिस हजारमा खुम्चियो । शत्रु हामीसँग कम मात्र डराउन थाल्यो । जापानले चीन कब्जा गर्दा हामीले च्याङ काई शेकसँग सहकार्य गर्न चाह्यौं । हाम्रो सङ्ख्या कम भएकाले ऊ हामीसँग डराएन । अनि ऊ हामीसँग सहकार्य गर्न तयार बन्यो । च्याङ काई शेकको इच्छा जापानलाई लगाएर हामीलाई सिध्याउने । तर जापानविरोधी लडाईको क्रममा हामी दुई हजारबाट दश लाखको सङ्ख्यामा पुग्यौं । त्यसो होला भनेर च्याङ काई शेकले अपेक्षा गरेको पनि थिएन । जापानले आत्मसमर्पण गरेपछि च्याङ काई शेकका चालिस लाख सेनाले हामीमाथि हमला गर्न थाल्यो, हामीसँग जम्मा दश लाख सेना थियो । आधार क्षेत्रमा दश करोड जनसङ्ख्या थियो । साढे तीन वर्षको अन्तरालमा हामीले च्याङ काई शेकलाई पराजीत ग¥यौं । त्यो अवधिको युद्ध भने छापामार युद्ध थिएन । त्यो ठूलो आकारको लडाईं थियो । तपार्इंको लेखमा उल्लेख भएजस्तै विमान, तोप, ट्याङ्कहरू सबैले कुनै लछारपाटो लगाउन सकेनन् । च्याङ काई शेकसँग ती सबै हतियार थिए तर हामीसँग ती कुनै पनि हातहतियार थिएनन् । पछि मात्र हामीले केही तोपहरू कब्जामा लिएका थियौं ।
प्रधानमन्त्री चाओ एन लाईःअन्तिम समयमा त हामीले ट्याङ्कहरू पनि कब्जा गर्यौं ।
अध्यक्ष माओः हामीले विशेष गरी तोपहरू कब्जा ग¥यौं । फलतः हामी तोप चलाउने सैनिकहरूको डिभिजन नै बनाउन सफल भयौं । तोप ब्रिगेडहरू अथवा तोप रेजिमेन्टहरू बनायौं । ती सबै अमेरिकी हतियारहरू थिए ।
प्रधानमन्त्री चाओ एन लाईः बेइजिङ पनि मुक्त भए पश्चात हामीले परेड आयोजना ग¥यौं । त्यहाँ प्रदर्शन गरिएका सबै हतियार अमेरिकी थिए । त्यत्ति बेलासम्म अमेरिकीहरू फर्किसकेका थिएनन् । त्यो परेड अवलोकन गर्न अमेरिकी दुतावासका अधिकारी र सैनिक सहचरी पनि सहभागी थिए ।
चे ग्वेभाराः युद्धमा होमिएका शुरुको समयमा मैले नेतृत्व लडाकुहरूको सङ्ख्या मुश्किलले एउटा कम्पनी थियो । जब हामीले ट्याङ्क कब्जा गर्न सफल भयौं, हामी सबै निकै हर्षित भयौं । तर फिडेलले त्यो ट्याङ्क अन्यत्र लान चाहनुभयो । म बेखुस भएँ । म बाजुका (ट्याङ्कको प्रतिरोध गर्ने छोटो दुरी मारक हतियार) को सट्टामा मात्र त्यो ट्याङ्क दिन तयार भएँ ।
अध्यक्ष माओः हरेक दिन आकाशमा विमानहरू लगातार उडिरहेका हुन्थे तर उनीहरू मुस्किलले कसैलाई घाइते बनाउन सक्थे । सबै लडाकुहरू हरियो रङ्गको पहिरनमा हुन्थे । हरियो रङ्गको पहिरनले कसैको पनि रुपमा परिवर्तन देखिन्थ्यो । तपाईहरू सबै सैनिक पोशाकमा हुनुहुन्थ्यो ।
तपाईहरू सबै सिपाही हुनुहुन्थ्यो ।
ग्वेभाराः रोड्रग्युज (सहायक विदेश मन्त्री) त्यत्तिबेला हामीसँगै हुनुहुन्थेन । उहाँ कारागारमा लडिरहनुभएको थियो ।
अध्यक्ष माओः (रोड्रग्युजलाई संकेत गर्दै) तपाई त निकै कलिलो देखिनुहुन्छ त ।
रोड्रग्युजः २५ वर्षको भएँ ।
अध्यक्ष माओः (मोरा र सुनोललाई संकेत गर्दै) तपाईहरू सेनामा हुनुहुन्थ्यो ?
ग्वेभाराः मोराको पिताजी युद्धको मैदानमा गोली लागि सहिद बन्नुभएको थियो । सुनोलको शरीरको ६ वटा अङ्गमा तीन पटक चोट लाग्यो । म आफै पनि दुई पटक घाइते भएको भएँ । रोड्रग्युजलाई कारागारमा निकै यातना दिइयो । शुरुमा त हामी निकै थोरै मानिसमात्र थियौं । फिडेल आफै आफ्नो बन्दुकले लड्नुहुन्थ्यो । हामी जम्माजम्मी बाह« जना मानिस थियौं ।
अध्यक्षः तपाईहरू अस्सी जना हुनुहुन्थ्यो नि होइन र ?
ग्वेभाराः त्यो सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गयो । अन्तमा त जम्मा बाह« जना बाँकी भयौं ।
अध्यक्षः तिनै बाह« जना बीउ बने । तपाईको ठाउँको तापक्रम निकै राम्रो हुनुपर्छ ।
ग्वेभाराः क्युवाको उत्तरतिर २२ डिग्री छ ।
अध्यक्षः तपाईहरूको भूमि पनि त अब्बल रहेछ नि ।
ग्वेभाराः क्युवाको सबै भूमि खेतीयोग्य छ । बलौटे क्षेत्रमा नरिवलका रुखहरूको खेती हुनसक्छ । तर पहाडतिर त्यसको खेती निकै गाह«ो छ ।
अध्यक्षः त्यसो भए तपाईको देशको जनसङ्ख्या कम्तीमा ३ करोडसम्म बढ्न सक्छ ।
ग्वेभाराः इन्डोनेसियाको जाभा टापुमा मात्र ५ करोड जना बस्ने गर्छन् ।
अध्यक्षः हामीले च्याङ काई शेकलाई धन्यवाद दिए जस्तै तपाईहरूले पनि जनरल रुबेन फाल्गुन्सिओ बाटिस्टालाई धन्यवाद दिनुपर्छ । च्याङ काई शेकले मान्छे मारेर हामीलाई राम्रो पाठ सिकाए ।
अल्बर्टो मोरा बिसिराः हामी पनि बाटिस्टा प्रति आभारी छौं किनभने उनले धेरै जनतालाई हाम्रो पक्षमा धकेल्ने काम गरे ।
अध्यक्षः हाम्रो अर्को पनि शिक्षक छ । त्यो हो–साम्राज्यवाद । साम्राज्यवाद हाम्रो लामो समयको शिक्षक हो । सबभन्दा राम्रो शिक्षक त अमेरिकी साम्राज्यवाद हो । तपाईहरूको पनि दुई शिक्षक छन्–बाटिस्टा र अमेरिकी साम्राज्यवाद । मलाई जानकारी भएसम्म बाटिस्टा आजभोलि अमेरिकामा छन् । के उनी पुनरागमनको कुरा सोचिरहेका छन् ?
ग्वेभाराः बाटिस्टका समर्थकहरू आजभोलि ५ वटा गुटमा विभाजित भएका छन् । उनीहरू सबै गुटबाट जम्माजम्मी ५ जना राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार घोषणा गरिसकेका छन् । ती सबै पाँचै जना उम्मेदवारहरूको विचार एक अर्कोसँग नितान्त भिन्न छ । कोही बाटिस्टाको विरोध गर्छन् भने कोही धेरै–थोरै बाटिस्टा जस्तै व्यवहार गर्ने गर्छन् ।
अध्यक्ष माओः उनीहरू बाटिस्टा हेरी केही पनि होइन । बाटिस्टा आजभोलि कति वर्षका भए ?
ग्वेभाराः ६० वर्षका भए ।
अध्यक्ष माओः हाम्रा च्याङ काई शेक आजभोलि ७४ वर्षका भए । बेइजिङ फर्कन उनी दिनदिनै अनेक चाल चालिरहेका छन् ।
मोराः ती तीनै जना उम्मेदवारहरू पार्टीका नेताहरू हुन् । जनतालाई उनीहरूको नाम थाहा छ र उनीहरू पनि दिनदिनै क्युवा फर्कन अनेक चालबाजी रच्ने गर्छन् ।
ग्वेभाराः हामीले विजय हासिल गरेको चार–पाँच दिन पछि मध्य अमेरिकाबाट क्युवाको लागि आए । उनीहरू बाटिस्टालाई अपदस्थ गर्ने भन्दै आएका थिए । तर उनीहरूलाई हामीले क्रान्तिमा सफलता हासिल गरेको कुरा जानकारी पनि भएन ।
अध्यक्ष माओः मध्य अमेरिकामा धेरै देशहरू छन् । मेरो विचारमा डोमिनिकन गणराज्य विश्वासयोग्य छ किनभने त्यहाँका जनता राफेल लिओनिदास त्रुजिल्लो मोलिनाविरुद्ध एक भएर लडेका थिए ।
ग्वेभाराः त्यो भन्न गाह्रो छ । त्रुजिल्लो ल्याटिन अमेरिकाका निकै परिपक्व तानाशाह हुन् । अमेरिकीहरू सबै तिनलाई धुलो चटाउने विचारमा छन् ।
अध्यक्षः अमेरिकीहरू त्रुजिल्लोलाई मनपराउँदैनन् ?
ग्वेभाराः सबै उनको विरोधमा छन् त्यसकारण उनलाई फाल्नुपर्दछ ।
प्रधानमन्त्री चाओ एन लाईः दक्षिण भियतनामी नेता नो दिन्ह दियम र दक्षिण कोरियाली नेता सिङ्मन रिलाई जस्तै ।
अध्यक्ष माओः नो दिन्ह दियम त आज सबभन्दा पीडामा छन् ।
प्रधानमन्त्री चाओ एन लाईः दलालको जीवन त्यत्ति सजिलो हुने गर्दैन ।
अध्यक्ष माओः अमेरिकीहरू अहिले च्याङ काई शेकलाई मन पराउँदैनन् । हामी उनीका प्रशंसक बनेका छौं । शतप्रतिशत अमेरिका पक्षधरहरू च्याङ काई शेक भन्दा खराब हुन् किनभने च्याङ काई शेक ९९ प्रतिशत मात्र अमेरिकाको दलाल हो । उनी फेरि पनि आफ्नो प्रभाव जोगाउन चाहन्छन् ।
प्रधानमन्त्री चाओ एन लाईः यो द्वन्द्ववाद हो ।
कमाण्डर इड्डी सुनोलः मलाई लाग्छ तपाईहरू फेरि पनि च्याङ काई शेकको आशा गरिरहनुभएको छ ।
अध्यक्ष माओः यदि उनले अमेरिकासँग आफ्नो सम्बन्ध तोडेको अवस्थामा हामी उनलाई सरकारमा स्थान दिन तयार छौं ।
प्रधानमन्त्री चाओ एन लाईः उनले ताइवानलाई सँगै ल्याउन सके त झनै राम्रोे भयो ।
प्रकाशित मिति: बुधवार, आश्विन २२, २०७६, १०:४९:००